2009 September | R Blog..!
Archive for September, 2009	Hello, I’maMac
I’ve just boughtanew Apple’s Macbook Pro 13″ two weeks ago. Since day one, I’m loving it. Although using Mac OS for the first time after using Windows for several years, it’s pretty confusing but after quite some time, I’m keeping up with it. MBP(Macbook Pro) came together with Apple’s newly released OS, Snow Leopard. It has Intel Core2Duo 2.26 Ghz (3MB L3 cache), 2GB DDR3 RAM, 250 GB SATA II HDD and Nvidia GeForce 9400 graphic card. It costs me RM 4,333 in total after the student rebate. I additionally boughtaremote control and upgrade the HDD from 160 to 250 since I got the student discount.
Well, I gotta go now. There will beanew category called “Mac” on my blog from now on Author: Rapster88	Categories: Mac, Special Events	Tags: Ho Ho Di Di
Author: Rapster88	Categories: Myself	Tags: Remove Ads from Cydia
Author: Rapster88	Categories: Tips Tricks and Tweaks, iPod	Tags: Take photos instantly with Cameroid
ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ webcam ရှိပေမယ့် software မရှိလို့ ပုံ ရိုးရိုးလေး ရိုက်ချင်တာတောင် ရိုက်လို့ မရပဲ ဖြစ်နေ သလား? Cameroid လို့ခှေါတဲ့ website ကို သုံးပြီးတော့ ပုံတွေကို အမြန်ဆုံး ရိုက်လို့ရပါတယ်။ တစ်ခြား ဘာမှ ထပ်ပြီး install လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ အဲ ဒါပေမယ့် Flash ရယ်၊ Webcam’s driver နဲ့ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်တော့ လိုတာပေါ့။ ပုံမှန် ပုံအပြင် တစ်ခြား effects တွေလဲ ထည့်ပြီးတော့ ရိုက်လို့ရတဲ့အတွက် ပျှောဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ပုံ မရမချင်း ရိုက်နေလို့ရပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီ ဆိုတော့မှ စက်ထဲ ကို save လုပ်လိုက်လို့ ရပါတယ်။ ကိုယ့်ပုံကိုလဲ အဲဒီ website က gallery မှာ သွားပြီး share လုပ်ချင်ရင်လဲ လုပ်လို့ရပါတယ်။ အခုချက်ချင်းပဲ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ.. Click here to visit Cameroid.com
Author: Rapster88	Categories: Useful Websites	Tags: Best Wallpaper site [Interfacelift.com]
ကျွန်တှော ဒီရက်ပိုင်းက ရထားတဲ့ wall paper တွေ အလကားပေးတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုကို ပြန်ပြီး ရှယ်ပေးချင်ပါတယ်။ Interfacelift.com ဆိုတဲ့ ဆိုက်မှာ wallpaper လှလှလေးတွေ ကို အလကား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တှော သဘောအကျဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး တစ်ခုကတော့ screen resolution အစုံရှိတာပါ။ ရနိုင်တဲ့ resolution တွေက
Author: Rapster88	Categories: Useful Websites	Tags: RSS feed
Posting tweet...Powered by Twitter ToolsSponsors	Spam Blocked	17,625 spam comments blocked byAkismet